Madaxweynaha dalka Haiti oo gurigiisa lagu dhex dilay | HalQaran.com
Home Caalamka Madaxweynaha dalka Haiti oo gurigiisa lagu dhex dilay
Madaxweynaha dalka Haiti oo gurigiisa lagu dhex dilay
Madaxweynihii dalka Haiti Jovenel Moïse oo la dilay.
Haiti (Halqaran.com) – Madaxweynihii dalka Haiti Jovenel Moïse ayaa maanta waxaa lagu dhex dilay gurigiisa, waxaa sidaas war-saxaafadeed ku sheegay ra’iisul wasaaraha ku meel gaarka ah dalkaas Claude Joseph.
Ra’iisul Wasaare Jospeh ayaa sheegay in koox aan la aqoonsan ay soo weerareen guri gaar ah oo uu deganaa madaxweynaha, kadibna ay dileen.
Xaaska madaxweynaha, Marwada Koowaad Martine Moïse, ayaa sidoo kale la dhaawacay, waxaana la dhigay Isbital, sida uu sheegay ra’iisul wasaaraha ku meel gaarka ah, Claude Joseph.
Joesph ayaa cambaareeyey wax uu ugu yeeray ficil naceyb ah oo ka baxsan bani’aadannimada, islamarkaana ah xaasidnimo,” wuxuuna intaas ku daray in booliska Haiti iyo mas’uuliyiinta kale ay gacanta ku hayaan xaaladda.
Joseph ayaa sheegay inuu hadda isaga hayo talada dalka.
Si kastaba, dilka Madaxweynaha dalka Haiti ayaa ku soo beegmaya xilli dalkaas ay ka jiraan qalalaase siyaasadeed iyo mid dhaqaale, sarena ay uga kaceen rabshadaha burcadnimada.
Madaxweynaha dalka Haiti